musha nyika dzakabatana Singers Nicki Minaj Utano Nhau Plus Untold Biography Facts
CB inopa Nyaya Yakazara yemuAmerican-Trinidadian Anonyanya kuzivikanwa nezita rezita rezita “Nicki Minaj“. Yedu Nicki Minaj Childhood Nhau pamwe neS Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeakajeka zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Kuongororwa kwemurapi weTrinidadian -America kunosanganisira hupenyu hwake hwepakutanga, nhoroondo yehupenyu pamberi pemukurumbira, nhoroondo yemhuri uye hupenyu hwega. Kunyanya zvakadaro, zvimwe OFF uye ON-Screen zvishoma-zvinozivikanwa chokwadi nezvake.
Hongu, munhu wose anoziva nezvavo inoyerera nokukurumidza-yakataurwa rap rap uye zvinyorwa zvinoparadza. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Nicki Minaj's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Nicki Minaj Childhood Nhau - Hupenyu hwepakutanga uye Nhoroondo Yemhuri:
Nicki Minaj (christened Onika Tanya Maraj) akaberekwa musi we 8th waDecember 1982 muSt James kuTrinidad neTobago.
Nzvimbo yekuberekwa kwayo mapatya Nyika yeChirungu iyo inogoverana neNorth East maritime muganhu neBarbados, Rihanna's nzvimbo yokuberekwa.
Nicki aive mwana wechipiri akaberekwa naamai vake Carol Maraj (mubatsiri wemukoti) uye kuna baba vake, Robert Maraj (aishanda neAmerican Express courier service panguva iyoyo).
Nezve midzi yaNicki, baba vake ndeveIndo-Trinidadian mabviro amai vake vari veAfro-Trinidadian dzinza. Zvakare, Nicki chikamu chechina cheIndia.
Nicki Minaj Zvekuchecheredza Biography - Kurera Kwakasimba MuQueens NY:
Rap prodigy pakutanga akakurira pamwe nemukoma wake mukoma Jelani kumba kwaambuya vavo muSt James apo vabereki vavo vakaedza kugara kuQueens immigrant neighborhood muNew York.
Hazvina kutora nguva refu Nicki (ane makore 5) uye mukoma wake mukuru vakabatana nevabereki vavo kuNew York kwaakange akarerwa nekushushikana nekuda kwekudhakwa kwababa vake nedoro uye kutsemuka.
“Ndakafunga kuti tichangofara chete, asi nemubereki akapindwa muropa nezvinodhaka, hapana chinhu chinonzi kufara.
Paunenge uine baba vari kuba midziyo yako nekutengesa kuitira kuti vatenge chipenga, unotambura.
Iwe unouya kumba kubva kuchikoro uye mubhedha wako waenda. Wakafanana, 'Chii chakaitika? "
Anorondedzera Nicki nezvehunhu hwababa vake.
Nicki, zvisinei, akawana kupukunyuka kubva kuhusiku hwehuduku hwake kuburikidza nekugadzirira mafungiro chimwe chezvo chinosanganisira kufunga kwekubudirira kuitira kuti uchinje zvinhu zvose.
"Ndainzwa sekunge ndaikwanisa kuchengeta amai vangu, amai vangu vaisazofanira kugara nababa vangu ... saka ndaigara ndichinzwa sekunge kupfuma kucharapa zvese, uye ndizvo zvaigara zvichindifambisa".
Nicki Minaj Dzidzo:
Chinonyanya kuzivikanwa pakati pedzidzo yaNicki yaive dzidzo yake Elizabeth Blackwell Middle School kwaakatora chikoro mumimhanzi ndokuratidza majeki ake ekupemberera rap wakati aive akwegura 12.
Nicki pashure pacho yakafambira mberi kusvika LaGuardia High School yeMimhanzi uye Art kwaakadzidza kutamba clarinet uye akabatanidzwa mumutambo unotamba.
Nicki Minaj Biography - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira Nhau:
Paakapedza chikoro chesekondari, Nicki aida kuve mutambi asi akazvitadza. Iye akazo tora akati wandei mabasa asinganzwisisike ayo iye aigara achidzingwa nekuda kwekushaya hunhu.
Achiziva kuti aizogara achinetseka nekuchengeta Mabasa, Nicki akadzokera mukuita raramo nekushandisa matarenda emimhanzi.
Kusvikira izvozvi, akabatana ne rap quartet inozivikanwa se "The Hoodstars" mu2004. Boka re4 iro rakanyorera kupinda kweWWE varwi panguva iyoyo kwaive kuchema kure kubva pane izvo Nicki aitarisira kuve. Iye, saka, akasiya anoteedzera ega basa.
Kufanana nevazhinji vanobudirira maartist, Nicki akatanga nekutora mademo aakaisa kune yake MySpace account pamwe nekutumira vamwe kune vanokurudzira muindasitiri yemimhanzi. Makore gare gare, akasangana neVamiririri veiyo Yakasviba Mari Varairidzi chitambi uyo akafarira mabasa ake, akamupa chibvumirano ndokuona kugamuchirwa kwezita rake rematambo "Nicky Minaj".
Nicki Minaj Bio - Simuka Mukurumbira Nhau:
Ndichiri paKasviba Mari Chinyorwa, Nicki akarekodha mashoma budiriro pamwe nekuburitswa kwake mixtapes, "Nguva yekutamba Yapfuura" uye "Sucka Yemahara". Uye zvakare, akatumidzwa kunzi Mukadzi Artist wegore 2008 ku Underground Music Awards.
Zvakangodaro, aive achiri kure kure nemukurumbira kusvika gore ra2009 paakapihwa kondirakiti kune Young Money chitambi nemurapi akafadza, Lil Wayne.
Iko kusimudzira kwakamuona achiva mukadzi wekutanga Artiste kusainwa nechiratidziro zvakare kwakatungamira mukuburitswa kwake kwekutengesa akabudirira kutanga asina kuroorwa, "Bedrock".
Nicki akazopedzisira anzwa chiyero chizere chemukurumbira munaNovember 2010 paakaburitsa yake yekutanga studio album "Pink Chishanu".
Iyo albham iyo yakatanga panhamba mbiri paBillboard 200, yakagamuchira ongororo dzakanaka kubva kuvatsoropodzi uye yakapihwa platinamu muna Zvita wegore iro.
Nicki Minaj Rudo Hupenyu:
Nicki Minaj ave ane vashoma hukama hwehukama husati hwaitika uye mushure mokunge amuka mukurumbira. Tinokuunzira humwe hukama hwehukama uhwo.
Chekutanga yaive hukama hwake nemuAmerican rapper, Safaree Samuel. Idzo dzaimbove-shiri dzerudo dzainakidzwa nehukama hwakavanzika kwemakore.
Hukama hwavo hwakangoenda pachena parakasvika pakadzikira muna2014 vaviri vacho vachipomerana kubiridzira, kunyepa nekuba panguva yekupfira vanhu paTwitter. Nicki anotaurira zvakawanda zvakaitika pakati pavo munziyo dzePinkprint Album yake.
Kune rimwe divi, Safaree anotsigira kuti akarambana nemurapi nekuda kwekusaremekedza kwaivapo muhukama hwavo.
Achifambira mberi, Nicki akatanga hukama hwakasununguka naMuek Mill mu2015. Vaitaura kusvika pakuguma kwekunge vaita basa. Zvisinei, vanyoro vakaramba vachienda, mina Minaj achitaura kuti iye achiri musikana.
Mwedzi mishoma mushure meiyo tweet, Nicki aive nehukama husina kusimbiswa naRapper Nas (1) pamwe nehukama hwehukama naRappers Drake (2) naEminem (3).
Nicki Minaj Hupenyu Hwemhuri:
Nicki akaberekerwa mumhuri ye6. Tinokuudza mashoko echokwadi nezvemhuri yemhuri yake.
Pamusoro pababa vake: Baba vaNicki, Robert Maraj akazvarwa pazuva re12th raJuly 1956. Kunyangwe Robert aive asiri iye akanakisa emadzibaba panguva yaMinaj paUdiki, anga agara kwenguva refu achirapwa kupindwa muropa nedoro uye kutsemuka.
Zvakangodaro, Nicki haarasikirwe nemukana wekurondedzera zvakashata zvaBaba vake zvekutanga. Maererano naye:
"Ndiyo mutengo wamunobhadhara paunoshandisa zvinodhaka uye doro. Zvichida rimwe zuva mwanasikana wako achave akakurumbira uye achitaura nemagazini yose pamusoro payo, saka funga nezvazvo, vana kunze uko vanoda kuve mapenzi. "
Robert zvino anogara sebaba vane hanya uye anoimba mimhanzi yevhangeri.
Pamusoro paamai vake: Amai vaNicki, Carol akazvarwa musi we24th waZvita 1959. Carol uyo akafanana zvakafanana naNicki akamboshanda semubatsiri wevanamukoti, mabharani wezvekuverenga uye zvino anoimba mimhanzi yevhangeri.
Sezvo amai, vakaona kuberekwa kwevana vavo munguva dzakaoma uye semudzimai, vakachengetedza imba yake naRobert vari vapenyu pasinei nekushandisa kwake zvinodhaka panguva iyoyo.
Nehanzvadzi dzake: Minaj ane mukoma mukuru anonzi Jelani uye munun'una wechidiki anonzi Micaiah. Jelani ishamwari yakawanda iyo yakamboroorwa nemukadzi anozivikanwa saJacqueline Robinson. Akanga ari mu2017 akawanikwa aine mhosva yekupamba chikwata chake chemakore gumi nemana uye akatongerwa makore 11 muJail.
Kune rumwe rutivi, Micaiah, akaberekwa musi we 29th waMarch 1998 murume wechidiki anofara neropafadzo dzekuva mukoma muduku wechiremba mukuru.
Achibva kure nehama, Minaj ane hanzvadzi yakanaka kwazvo inonzi ming. Vose vari vaviri vanogovana kunyemwerera kumwe chete.
Nicki Minaj Biography Chokwadi - Kutsigira uye Investment:
Asides kubva mukuita mari kubva kumumhanzi, Minaj atora mari zhinji kubva kumabvumirano ake naPepsi, Beats naDre, Adidas uye kubatana kwake neMAC Lipsticks.
Pamari yekudyara, Minaj ane danda mukushambadzira kwaJay Tidal. Iye ane yake yega mutsara wezvinonhuwira, miromo gloss, Lipsticks, zvipfeko, zvishongedzo uye zvigadzirwa zvemumba.
Iye rapper akashandawo pamwe chete nemitambo inorema Glu Mobile kugadzira mukwikwidzi kune anozivikanwa maapplication na Kim Kardashian, Britney Spears uye Katy Perry.
Nicki Minaj Mafirimu:
Kure nemumhanzi, Nicki Minaj ane nyeredzi mune akati wandei mafirimu uye imwe animation. Ivo vanosanganisira "Barbershop: Iyo Inotevera Kucheka," (2016) uye "Mumwe Mukadzi" (2014). Akakweretesa izwi rake kuna Steffie, mutambi ane mukurumbira muvhi yemuvhi "Ice Age: A Continental Drift." (2012).
Nicki Minaj Hupenyu hweMunhu:
Nicki Minaj inyanzvi uye ane hukasha muimbi ane hunhu hwakaumbwa neakasiyana mafaro aanogara. Muchokwadi, zita rake remuchadenga "Nicki Minaj" ndeye hupenyu hwekufungidzira maanotaridza sa barbie kuruzhinji.
Muchiedza chimwe chete, iye anoreva kuputika uye dzimwe nguva asina hunhu persona zvakare fungidziro mhenyu yeRoman Zolanski, anozvitutumadza uye asingafungi kuchinja ego uyo muimbi akambotaura;
“Ndakamukumbira kuti aende, asi haagoni. Ari pano nechikonzero. Vanhu vamuburitsa. Vanhu vamuziva iye zvino haachaenda. ”
Kune rimwe divi revanhu, Nicki anoyamura uye ane huwandu hwerupo hunoshanda kuchikwereti chake. Kunyanya zvakadaro, anotenda mumhuri uye anochengeta avo vaanoda padhuze naye. Nezve maonero ake echitendero, Nicki haana kumbokundikana kubvuma kuti anonamata kuna Mwari.
Sezvineiwo, iyo chete tattoo yaanayo paruoko rwake kunyora kweChinese kunoshandura saMwari anogara ainewe.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Nicki Minaj Childhood Story pamwe chete biography nhoroondo. At ChildhoodBiography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!